Journey to Nowhere JTN Igbo | Journey To Nowhere
«Njem ka nweghị ebe»
na prosaic libretto
Kpakpandọ n’ụzọ ijizi okwu – a n’ụwa nke mmụọ, nke ga-aghọ ndị na behest nke Ukwu Metakosmos-atụpụta ụkpụrụ ụlọ.
The Mmụọ enweghị mkpụrụ obi. Ya mere, ha ghara inwe ike, ihe nwere ike na-enweta site efu ụmụ mmadụ. Ya mere, ndị mmụọ nọ ha kpakpandọ n’ụzọ ijizi okwu ụwa nọgidere ichu nta nke furu efu mmadụ mkpụrụ obi, stacking ha na ebe pụrụ iche (The Black anwansi onu), iji nke ihe na-enye mkpụrụ obi mmadụ. Dị ka iwu si nke nta nke ike nke mmadụ efu mkpụrụ obi nwere ike na-eji ndị mmụọ nsọ na onye mmadụ nyere ya aha. Na nloghachi, mmụọ dị njikere inyere a onye ga-ihe ọ bụla ọ chọrọ na ndụ elu ala.
Iji na-agba ụmụ mmadụ na-kpakpandọ n’ụzọ ijizi okwu ụwa mmụọ na-eji a pụrụ iche abụ olu ụtọ. (Òkù – Akon-Right Now # 1)
Na ochie Mediterranean obodo na-eto eto nwa mgbei nwa nke iri na abụọ na-ezukọ sentinel kpakpandọ n’ụzọ ijizi okwu spirit (The Ọkachamara – Akon-Right Now # 2), onye na-agba ya ka ịbanye ụgbọ mmiri ahụ (The ụgbọ mmiri si n’ala dị anya – Akon-Right Now # 3), nke a ga-enye ya nrọ nke a ka mma n’ụwa. N’ihi na nwa na-enweghị ihe ndị doro anya. (Drifter – Akon-Right Now # 4)
N’ihi na furu efu mkpụrụ obi na-achọ na Ụwa mmụọ nwere a pụrụ iche iji. Sentinel spirit (The Ọkachamara)-ele anya dị ka ihe ochie bara ọgaranya na trustful nwoke mgbe niile na-achọ mkpụrụ obi nke a na-amakwa jijiji n’ụwa na-agwa ya ma ọ bụ ya ka ịbanye ụgbọ mmiri ahụ (kpakpandọ n’ụzọ ijizi okwu ugbo) ka a anya mba, ebe onye nwere ike ịhụ ihe ọ chọrọ .
N’otu oge ahụ, sentinel mmụọ adịghị agwa ndị njem banyere ọnọdụ nke ndị dị otú ahụ a “obiọma.” Dịghị onye agha na-aga na a njem site na ike. Nke a n’afọ ofufo oke nke mmadụ, bụ ndị kwesịrị ịghọta na dị nnọọ ihe ọ bụla na-eme free na mee elu mee ma ọ bụ mgbe e mesịrị, ma n’ihi na ihe niile na otu onye ga-akwụ ihe.
Ma anyị dike – nnọọ a owu na-ama nwa okorobịa, napụ nke ịhụnanya nke ndị mụrụ na-adịghị ahụ ihe ọ bụla na nke a ma e wezụga ndị na-emegbu ha ọnụma na-adịghị agwụ agwụ ịda ogbenye …
Na ụgbọ mmiri (kọrọ n’akụkọ ifo “Iberibe Dutchman”), Captain na-akpọ nwa okoro ahụ “Drifter” na ụgbọ mmiri na ya ka Island alụlụ (The Island nke alụlụ – Akon-Right Now # 4), nke Ọkachamara kwuru. Ozugbo ụgbọ mmiri set kwaaji, Drifter chọpụtara, na kpakpando na mbara igwe freezed, na ụgbọ mmiri ahụ, ọ kwagara na inflated ákwà ifufe kwụsịrị ka dissect mmiri. Nke a ụgbọ mmiri apụghị-arapara ọ bụla n’ikpere mmiri, ma e wezụga otu àgwàetiti – Island nke alụlụ. – A ọdụ ụgbọ mmiri nke kpakpandọ n’ụzọ ijizi okwu ụwa.
Nke a oge niile mmụọ, na-aṅụrị ọṅụ na ya ọzọ aja bụ na ọ ụzọ ọṅụ na-abụ abụ kasị amasị ha song (Black kandụl Now – Akon-Right Now # 6). Black kandụl udo site a ebua mgbe Akwa oku nke kpakpandọ n’ụzọ ijizi okwu ibelata oge maka ụmụ mmadụ njem-enwe ike ịhụ na-eche ụwa nke ọ ga-ahụ onwe ya.
Ozugbo njem malitere, mmụọ ozugbo maara banyere ya na-akwadebe izute a furu efu mkpụrụ obi ha n’ụwa. (Ndị Mmụọ opitoropi – Akon-Right Now # 7)
Rutere drifter na àgwàetiti ahụ, onyeisi ndị nche na-ekwe nkwa laghachi ya na a afọ na-atụ aro ya ụzọ kpokọtara mma nke ga-azali ajụjụ (The na-achọ inwere ọma – Akon-Right Now # 8). Drifter ahụ dị mma na-ezo aka ya na ya ajụjụ. Ọma na-agwa ya na “ebe oge na-agba ọ dịghị onye maara”, ma na-atụ aro na azịza a na-achọta na Town nke Onyunyo, bụ nke mere ka n’ụzọ si Ime Anwansi kristal ájá.
Ọfọn na-adọ aka ná ntị nnọọ drifter na ọ bụla ikpe ọ ga-agwa ya aha onye ọ bụla. Na dị ka ihe nduzi maka drifter na ya ọsọ e nwere onyinyo na ọ ga-ezo ụzọ gaa n’obodo ahụ. N’iburu nke a n’uche, Drifter e awagharị site mirror ụzọ sochiri a onyinyo.
Na ọchịchịrị ahụ City nke Onyunyo ọ na-ahụ ọtụtụ ebe obibi, ma ha enweghị windo ma ọ bụ ibo ụzọ (Town nke onyinyo – Akon-Right Now # 9). Ọ dịghị onye na-ekwu okwu, ọ dịghị onye na-ajụ.
Na-agabigakwa na-abaghị uru n’ihi ya Town nke Onyunyo (n’ikpeazụ – Akon-Right Now # 10), na anọgide na-ahụ ụzọ nke anwansi mirror ájá (Gbara Ọchịchịrị ụzọ – Akon-Right Now # 11) Drifter osobo a n’ezie ụdị spirit – Leprechaun. (The Leprechaun – Akon-Right Now # 12 (Italian lyrics) .Leprechaun na-enyere ndị Drifter, ma ghọtara ihe efu dị na ya mgbalị ịchọpụta aha nke a onye, na-toddling pụọ, absentmindedly ahapụ ya anya – a kristal obi ụtọ na a map nke n’àgwàetiti-mba (Sanctum ala), dere na akpụkpọ nke a agwo oyo (agwo oyo akpụkpọ map).
Ile n’ime a obi ụtọ, Drifter na-ahụ amaghị ihe na-eju anya Ivory Castle (Ụlọ Nsọ nke gị na ya kwụsị – Akon-Right Now # 13) na aka iso ụzọ ya. (The ụwa nke ara – Akon-Right Now # 14) Ikebịghike enye osobo a nnukwu Black nwaanyị di ya nwụrụ ududo. (Black nwaanyị di ya nwụrụ aria – Akon-Right Now # 15) ududo-agwa ya akụkọ nke ya njem, na-enye aka ya n’ọnọdụ ya aha (ududo – Akon-Right Now # 16).
Drifter na-echeta na e kwuru okwu site na-achọ inwere mma (Unu okwu na-amabughị n’abalị a – Akon-Right Now # 17) na ya n’ime obi lawara na ududo, na-aga n’ihu ya ụzọ na Leprechaun si map ka Igbu obodo, ebe ọ na-n’aka bụ Ụlọ Nsọ nke ya gị na ya kwụsị – ụfọdụ ebe, ebe ihe niile e kwesịrị ime.
-Agafe surly Nwụrụ Anwụ City (Igbu obodo – Akon-Right Now # 18), n’okpuru ukwu-abụ abụ nke mmụọ, na ogbe ndịda ọ na-ahụ nnukwu ụlọ na anya ugwu, kpọmkwem otu, bụ nke gosiri ya ndị kristal obi ụtọ.
Mmụọ na-ha ịchụ nta na-abụ abụ a song banyere a Igbu obodo na ha Queen – atọ nchara spirit. Ha-eche ihe mere na-enupụ isi na mkpụrụ obi mmadụ adịghị na-achọ ime ha ụwa nke udo na ịdị ebube, nke nwere niile dị gị mkpa maka anwụghị anwụ na obi ụtọ. Soloist na ukwe bụ Queen nke Mmụọ. Ọ complimented ya atọ anya, nke na-enye ohere ịhụ ihe ma ọ bụ mmụọ, ma ọ bụ ụmụ mmadụ na-apụghị ịhụ. (Nke atọ anya – Akon-Right Now # 19)
Drifter na-eduzi kwupụta nnukwu ụlọ, ma na mberede ọ nụrụ aha ya. Ọ tụgharịa hụ iju ịma mma nke atọ nchara nwaanyị – Queen nke kpakpandọ n’ụzọ ijizi okwu ụwa. Anya ya na-glued ya ihu. Ọ na-kpọnwụrụ site egwu, ma na-anya ya, ọ na-asị a okwu, ọ na-apụ apụ ji nwayọọ nwayọọ na a obi jụrụ iju mmetụta nke naanị ihe efu n’ime ya.
Nke dị ná mpụga obodo Drifter okụt ochie uka na a gbawara mirror. Ọ bụ nnọọ iju mgbe n’enyo ọ na-ahụ echiche nke a agadi nwoke.
Na oge a ọ ịghọta, na ọ na-adịghị ya obi. Ọ bụghị heartbeats. E nweghị obi mgbe nile. (O zuru obi m pụọ – Akon-Right Now # 20)
Heartless Drifter na-aga n’ihu ya ụzọ, na-ele na-eru nso Castle, na-anụ olu dị mma, nke na-agwa ya ihe na-aga. (Monologue – Akon-Right Now # 21) Ọ na-aghota na obí eze, nke ọ na-ahụ na-bụ ụlọ nsọ ahụ nke ya akara aka.
Castle nke Ivory (ma ọ bụ Ivory Castle) – abụghị nanị na a ebe nsọ nke mmụọ ebe ha na-aga bukọrọkwa ngwongwo. Nke a bụ ebe a na ọ bụ nke onye ọ bụla na kpakpandọ n’ụzọ ijizi okwu. N’ihi ya, onye ọ bụla nwere ike ekwupụta onwe ya a nna ukwu nke ya. N’ihi na mmadụ a Castle ikpeazụ n’ókè nke njem. Ọ dịghị onye tupu pụrụ iru n’ebe a. Drifter-na-akpọ ya aha ma, si otú, ọ ga-eme ka ya na ikpeazụ nhọrọ a Castle.
Ya mere, n’ihi na anyị dike ebe a yiri ka dị ka Castle nke ya akara aka. Inside, na Castle nwere otutu enyo, ka onye ọ bụla ime eme ihe ndị ahụ e nyere ya site na isi na-akpata ya dị n’ụwa. N’ihi na ọ bụ nnọọ ezughị aba kwesịrị ekwesị mirror na ozugbo ndị ahụ na-emejuputa atumatu. Behind ọ bụla mirror ọzọ eziokwu na-echere n’ihi na otu onye bụ onye na-aga site na ya. N’ihi na Drifter nwere ike ịhụ nke a di iche iche nke nhọrọ – enyo, The Queen nyere ya a atọ anya. Ma ọ bụghị ya, echiche nke nile ịmalite-njem ga-efu.
Drifter ga-eme ka ya top eburu. Ma ndị mmụọ na-eweta Drifter na ha ebe obibi na bụghị ịkpata maka themself ọma, dị ka a ikpeazụ-eme, ha na-njikere iji ya furu efu mkpụrụ obi nke ha na iwu – na onye mirror ọ ga-aga, ka ihe spirit ga-nwe ike nke ya ruo mgbe ebighị ebi furu efu mkpụrụ obi.
Ịbanye Castle, isi awọ-haired Drifter na-ahụ, na n’ime ya ime ịma mma na ije na anya dị ka a ọtụtụ ijeri enyo. -Ebili na etiti ụlọ nzukọ, ọ jụrụ ndị Castle ya iji gosi ya na ụwa whish e kwere nkwa ya site Ọkachamara.
Mgbe mbụ ya okwu, na yiri mgbidi nke ụlọ nsọ na-amalite ịda mbà gburugburu ya, na na ọ bụla mirror ọ hụrụ bụghị nanị na mmụọ nsọ, onye ọ zutere na ụzọ ya, kamakwa ọtụtụ ndị ọzọ kpakpandọ n’ụzọ ijizi okwu e kere eke. Ịghọta ọkwá ya, Drifter na mberede ahụ a obere kristal obi ụtọ, nke na-apụta ìhè a obere doro anya mirror ọlaọcha etiti. N’enweghị olileanya, ya na anya ya na-emechi, ọ emee n’ime ya ….
Ọzọ oge adịghị enwe mmetụta nke gafere nke obi ya, wee meghee anya ya, Drifter na-ahụ onwe ya ahụ n’otu ebe ahụ ebe ọ malitere sikwara ike njite njem na n’ebe dị anya, na-apụkwa n’anya na ụzarị nke ọwụwa anyanwụ, silhouette nke a ụgbọ mmiri nke ghosts. (The Ivory nnukwu ụlọ – Akon-Right Now # 22)
N’isi ụtụtụ ọ bịara n’obodo ya. N’ihi na mmadụ nile ọ bụ onye ọ bụla ọzọ, ma dị nnọọ a toddled isi awọ-haired agadi nwoke. Drifter juru ya nnọọ anya na o chetara ihe niile, ma ndị enyi ya na ndị agbata obi amataghị ya. Ọ na-amaghị ma, na n’ihi na ya n’obodo ndị nanị otu abalị dị nnọọ gafere …
Ka ọ dịgodị, duhie olileanya na-adịghị obodo nke mmụọ na-echetara ya na ndibiat na-adịghị agwụ agwụ. Ha na-ekwu na ọ na ihe ọ na-ji (atọ anya), ma ha enweghị ihe ọ ga-enye ha kama (aha ya). (Ihe Mmụta akara aka Vol. 1 (mmụọ ele) – Akon-Right Now # 23)
Gara n’ihu na-eche banyere ihe mere ya, agadi nwoke laghachi n’ụlọ ya ma ghota na ugbu a ọ perceives eziokwu site nke atọ anya, natara na nke kpakpando. (Ihe Mmụta akara aka Vol. 2 (Drifter ele) – Akon-Right Now # 24) Ugbu a, ọ pụrụ ịhụ ihe mmadụ nkịtị na-apụghị ịhụ.
A na mberede kụrụ aka n’ọnụ ụzọ etre agadi nwoke ahụ echiche. N’ọnụ ọnụ ọ na-ahụ a mara mma nwa agbọghọ (Cascawella – Akon-Right Now # 25). Kpakpandọ n’ụzọ ijizi okwu Queen rutere ụwa nke ụmụ mmadụ, aha ya bụ Drifter dị ka ohu nke ọchịchịrị, bụ ndị hapụrụ ya obi na a anya n’ụwa ndị mmụọ. Mgbe ya okwu ọ na-enyo n’ime a nnukwu ọcha agwo oyo na crawls pụọ.
Ọ na-gwara Drifter na na mmadụ ọ bụla ndụ e nwere ọtụtụ ihe na ga-agbanwe, gụnyere aha, ma site na-agbanwe obi ya, a onye-enweghị ike ịgbanwe ndụ ya.
The ibu agwọ crawled pụọ, ma ọ hapụrụ a obere ọlaọcha gbajiri cross, na-akọwa, na site n’enyemaka nke ya, Drifter nwere ike inwe azụ n’ime N’ụwa nke kpakpando, mezue emechaghi ndibiat ya. (Agwo oyo – Akon-Right Now # 26)
Ikpeazụ symphonic mejupụtara (Farewell-eje ije – Akon-Right Now # 27) bụ a Medley na ọ na-anọchi anya ebe nchekwa nke a nwoke, bụ ndị na-echeta ihe niile ya, tupu ọ ga-ahụ ma na-azụ ya obi site a gbaa ọchịchịrị kpakpandọ n’ụzọ ijizi okwu ụwa.
“M zutere Dima na nke mbụ ná ngwụsị nineties na Moscow na anyị n’otu ntabi kụrụ ya na ngwa ngwa ghọrọ ezigbo enyi. Ọ bụ otu n’ime ndị ọrụ nche abụọ si KGB 9 Ngalaba na-na akụkọ ihe mere eme nke ngalaba a n’ihu kọflịnks site na American president, Dima bụ President nke Russian Association nke Bodyguards na gwara m ka m na iso òtù inye aka mba mmekọahụ m nọ na-asọpụrụ ịnabata, o nwere nnọọ nkwekọrịta-arụ ọrụ na ndị kasị ibu n’ụwa ụlọ ọrụ na onye nchebe.
Anyị nkwonkwo omume ahụ dịgidere e guzobesịrị “Right Now agbọpụta mba nile nche ụlọ ọgbakọ” inyere ndị mmadụ aka izere nsogbu site n’inye ha a n’elu ikpo okwu iji kwurịta nche na ndị ọkachamara.
Na mgbe ọ gwara m ka m dezie ederede nke ọtụtụ songs m bụ na kwa obi ụtọ oblige. Ọbụna karị, m na-idem àgwà nke odide onwe ha. Ha English okwu na Russian uche na onye ọ bụla n’ime ha dị ka ụfọdụ ụdị akụkọ ifo, ma na a uche na ha so dum.
-Erule ọgwụgwụ nke 2013 niile odide n’ihi na “Njem ka nweghị ebe” e ju, na ndị egwú libretto. The gbalaga nwetara aha ya si ụlọ ọgbakọ si bodyguards.
M na ụmụ okorobịa enweta a pụrụ iche ụda. M ga-akpọ ya a oge a opera, ma ha tụlee ya a echiche efu. Gịnị ka ọ bụ n’ezie – ị nwere ikpe ikpe onwe gị
The President nke “Right Now agbọpụta si International nche Club”